ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်နည်း။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်း။ Gadget သတင်း
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာလောကတွင်လူများသည်သူတို့၏ဟောင်းနွမ်းသောအရာများကိုပြန်လည်ထူထောင်လာကြသည် ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများ လွမ်းဆွတ်မှု, အသံအရည်အသွေးသို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှာ၊ ၎င်းတို့ကိုအံဆွဲထဲမှာသိမ်းမထားခြင်းနှင့်အချို့သောအသုံးအနှုန်းများပေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းအနုပညာရှင်များနှင့်ဂီတအဖွဲ့များပင်သူတို့၏ဗီဒီယိုအသစ်များကိုဗီနိုင်းပုံစံဖြင့်ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားစဉ်ကကျွန်ုပ်သည် ၁၉၈၄ မှချိန်းဆိုခဲ့သောဗီနိုင်းမှတ်တမ်းကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိအသံစီဒီ၏အရည်အသွေးမရှိသော်လည်း၎င်းသည်လတ်ဆတ်ခြင်းသည်ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာနေသနည်း။ ဗီနိုင်း၏အသံကိုမစုံလင်မှုက၎င်းအား၎င်းတို့ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများပေးသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုအံ့ makes စေသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ discs တွေကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ အတွက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရရှိပြီးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ထားပါ။ ထိုမေးခွန်းပေါ်လာသလော။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ သင်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သတိရရမယ့်အရာကမျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံရဲ့လမ်းညွှန်မှုမဟုတ်ဘူး။ ရေစီးအောက်ရှိဗီနိုင်းကိုဘယ်တော့မှမဆေးပါနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအုပ်စုမှစာရွက်အလေးတစ်ချောင်းကောင်းကောင်းမလိုချင်ပါက ဗီနိုင်းတစ်ခုကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင် disc ၌ရှိသည့်အညစ်အကြေးပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ သိုလှောင်ခန်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောဗီနိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏအသုံးပြုသောမှတ်တမ်းနှင့်မတူပါ။
မျက်နှာပြင်ဖုန်နှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုရှင်းလင်းသည့်အလွယ်ဆုံးနည်းမှာ - ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြီး။ နာမည်ကသင့်ကိုမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ စျေးနှုန်းသည် ၁၀ မှ ၂၀ ကြားရှိသည်, အမေဇုံအပေါ်မည်သည့်ထပ်မံသွားစရာမလိုဘဲ သင် Hama အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလျှင်ယူရို ၁၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည် disc ကိုပြန်ဖွင့်မီနှင့်အပြီးကလွန်နှင့်သတိထားရန်သာလိုအပ်သည် ဖိအားအလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်.
၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များထဲတွင်လည်း၏ဖြစ်ပါတယ် ဗီနိုင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖြစ်နိုင်သောငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖယ်ရှားပါဒါကြောင့်ဒီဟာကပိုပြီးဖုန်မှုန့်တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေကိုတိုးတက်စေပြီးအဓိကအားဖြင့်အသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်.
ဤဖြေရှင်းချက်သည်ယခင်အပိုင်း၏ပထမဝမ်းကွဲဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် တူညီတဲ့နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ ပစ္စည်းဖြီး, Que ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအစားကတ္တီပါပါ။ ဒါဟာပျော့ပြောင်းပြီးပစ္စည်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှိသည် disc ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းအန္တရာယ်။ ကတ္တီပါဖြီး၏ဘေးထွက်?
အဓိကအားဖြင့် ပိုပြီးဖုန်ကိုဆွဲဆောင်သည်, ထို့ကြောင့်အခါအားလျော်စွာ၎င်းကိုအရက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်, ဥပမာ, ခန်းခြောက်စေ. ထက်နည်းဆယ်ယူရိုသည် ငါတို့ဆီမှာဒီကိရိယာအစုံရှိတယ် အရာ, ကတ္တီပါဖြီးင်အပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ turntable ၏အပ်သန့်ရှင်းရေးတစ်ခုမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအထည်နှင့်သေးငယ်တဲ့ဖြီးပါဝင်သည်။
ဒါပေမယ့်စိတ်အေးအေးထားပါ သင့်တွင်အထက်တွင်ပြခဲ့သည့်စုတ်တံနှစ်ခုရှိသည်မဟုတ်လျှင်သို့မဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုမဝယ်လိုပါကစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီနိုင်းများကိုသန့်ရှင်းစေရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ငါတို့အလွယ်တကူနဲ့စျေးပေါဝယ်နိုင်။ မဟုတ်ပါ၊ မှတ်တမ်းများကိုထိပုတ်ပါ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအထည်များ၊ ဖုန်ထည်များသို့မဟုတ်သုတ်ဆေးများကိုဆေးကြောခြင်းကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောပစ္စည်းများ။ ကျနော်တို့ရှင်းပြတဲ့အခါသင်မှတ်မိပါသလား သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းနည်း? ကောင်းပြီ, ဒြပ်စင်အများအပြားဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများသန့်ရှင်းရေးမှဘုံဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည် အိမ်သာစက္ကူသို့မဟုတ်တစ်ရှူးများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုမသုံးပါနှင့်သူတို့ကဗီနိုင်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအကြွင်းအကျန်ကိုချွတ်အဖြစ်။ ငါတို့သည်လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအထည်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ လုပ်ပါ ဦး အသစ်စက်စက်အခြားအရာများသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့တစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ ဒါကိုဆေးကြောခြင်းသို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခြင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်အသစ်တစ်ခုကိုထပ်မံအသုံးပြုကြပါစို့။ ဒီနှင့်အတူ ကျနော်တို့က disc ကိုခြစ်ရာကိုရှောင်ကြဉ်ပါလိမ့်မယ် အခြားဒြပ်စင်များသန့်ရှင်းရေး၏ရလဒ်အဖြစ်ကျန်ကြွင်းသောဖြစ်နိုင်သောအမှုန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း တစ် ဦး ဗီနိုင်းစံချိန်တင်သန့်ရှင်းရေးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် တိကျသောဒြပ်စင်များကိုရှာဖွေရန်စျေးကြီးရန်သို့မဟုတ်ခက်ခဲရန်မလိုအပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်ရှိသည့်သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစုတ်တံ၏တ ဦး တည်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေမယ့် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီနိုင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေပြီးထိုအသံအရည်အသွေးကိုကြာရှည်စွာဆက်လက်ရရှိစေသည်။.
ကျနော်တို့အကြံပြု အရက်မသုံးပါနဲ့၎င်းသည်အက်ဆစ်များနှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းများကိုပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်ပစ္စည်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖိုးတန်သော discs များကိုအသုံးမကျစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
Thermomix TM6 သည် WiFi ဆက်သွယ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အသိဥာဏ်ရှိသောစက်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ရတာနှစ်သက်သည်